TRELLIS FOR CANAB AAD NAFTAADA: SIDA LOO SAMEEYO QORYO KOR U DHIRTA - DHISMAYAASHA
Go'aaminta in ay ku hawlan tahay beerista canab, waa in maskaxda lagu hayaa in warshadani ay tahay sida liyu-u eg, oo aan lahayn qaab gaar ah, sidaas darteed waxay u baahan tahay taageero. Labadii sanno ee ugu horreysay ka dib markii laga beerto duurka canabku waxay u baahan yihiin taageero ku meel gaar ah.
Laba sanno ka dib, waxay noqotaa lagama maarmaan in la dhiso taageero joogta ah Markaad doonaysid inaad canab ku baxdo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo sameynaayo trellis si aad u hesho gacmahaaga.
Xaqiiqdu waxay tahay in la dhammaystiray tuubooyinka lagu iibiyo dukaamada laga yaabo inaysan ku haboonayn. Intaa waxaa dheer, in la ogaado faahfaahinta wax soo saarkooda, waxaad dhisi kartaa naqshad la mid ah qajaarka ama yaanyada.
Tapestries waxaa loogu talagalay bilaash, labbo isku mid ah caleemaha. Waa inay bixiyaan hawo sare iyo iftiin leh duurka.
Doorashada qalabka taageerada
Aad ayey muhiim u tahay in la go'aamiyo wax-qabadka loogu talagalay trellis mustaqbalka. Haddii aad dooranayso tuubooyin alwaax ah, markaa waa inay noqdaan kuwo qoryo adag ah: ash, soodhaha, geedkii, dhirbaaxada.
Si loo kordhiyo nolosha alaabta mustaqbalka, waa inaad nadiifisaa qoryaha ka soo jilicsan. Hooska qoryaha alwaaxda ah waxay u baahan yihiin inay dib u kulmaan ama ku duubaan qalabka dushiisa.
Taageerada la taaban karo iyo tan biraha ayaa ka qaalisan, laakiin waxay sii socon doonaan in ka badan toban sano. Dhuumaha birta waa in ay ahaadaan ugu yaraan 5 cm dhexroor iyo 10-12 cm oo ah xoojinta xoojinta.
Waxaa lagugula taliyay inaad wax akhrisato: Deed-qurxinta adoo samaysanaya.
Baro wax walba oo ku saabsan boqoshaada lohodka ee guriga halkan.
Akhri sida loo dhiso aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga gaar ah //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplichnie-soorujeniya/teplitsa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html.
Xulashada wire ee safafka toosan
Xadhigga waa in la doortaa galvanized, oo leh dhexroor ah 2.5 ilaa 4 mm. Waxaad isticmaali kartaa xargaha caanaha, laakiin xarku waa mid la doorbido.
Trellis wax soo saarka algorithm
Waa inay ku bilawdaa naqshad fudud - taageero toos ah oo leh safo xadhig ah oo giigsan. Ugu horeyn waxaad u baahan tahay in aad ku dhajiso tiirarka leh dhexroor 10-12 cm si qoto dheer ah 60-65 cm. Taageero dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah ayaa lagu aasay iyaga oo u dhaxeeya masaafada 3 mitir. Isla mar ahaantaana, safka safafka waa in laga dhistaa waqooyi ilaa koonfur.
Xadhigga hoose wuxuu ku taaganyahay 45 cm dhulka, safka xiga wuxuu ku yaalaa nus mitir midba midka kale. Xadhigga waxaa lagu dhejin karaa tuubooyin alwaax ah oo leh jajabyo, iyo birta u baahan tahay in la dhajiyo godad 5 mm ah si loogu soo jiido xadhigga.
Qaababka dhismaha gawaarida si ay gacmahooda u siiyaan.
Akhri sida loo dhiso qubeyska alwaaxa alwaaxa ah //rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/dachnyj-dush-svoimi-rukami-garantirovannyj-komfort-i-svezhest.html.
Qorshaha laba-jibbaaran ee Trellis
Iyada oo leh xannibaadyo ballaaran, iyo sidoo kale firfircoonida sii kordhaya, ayaa lakabyo laba-layn ah lagu rakibay. Waxay u jiidan jireen diyaarado ay ku xiri jireen canabki sabiib ah. Sababtoo ah dhererka duurka waxay helaan iftiin badan.
Moodhadhka noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa inuu naqshad ka duwan yahay: qulqulka, caleemaha, aroor, iwm. Wareegga noocan ah, masaafada u dhaxaysa saf canab waxay noqoneysaa 2.5-3 m.
Meel fog oo ah 7-8 m, dhererada xooggan oo leh dherer ahaan 2-2.5 m ayaa si adag loo rakibay lakabkoodu wuxuu u dhexeeyaa 1.5 m dheer wuxuu ku xiran yahay dhinaca sare, laga soo bilaabo dhammaadka wareegga xargaha, xayawaanka ama barafku waxay ku taaganyihiin dherer 20-25 cm.
Dhinac kasta waxay ku dhajiyeen 5 saf oo xadhig ah, kaas oo la jiiday laynka safka duurka labada dhinac. Safka hore ayaa lagu rakibay fogaan ah 30 cm dhulka, iyo 40 cm xigta midba midka kale. Marka xargaha la xidho, qaybo ka mid ah duurka waxaa loo qaybiyaa labada diyaaradood ee trellis ah si ay duurka u dagaan labada bidix ama diyaaradda saxda ah ee trellis.
Haddii aad rabto inaad geedo derbiyo ku beeri karto, waxaad si toos ah ugu dhejin kartaa tuubooyinka. Si arrintan loo sameeyo, silsiladaha waxaa lagu qalajiyaa derbiyada waxayna ku fidiyaan xadhigga safka dhererka nuska mitir.
Waxaa weli jira badan oo trellis badan ,. Marka si habboon loo rakibo, trellis for canab si dhakhso ah, tayada waxay hagaajineysaa. Maaddaama hawo ku filan, dhirta ay u nugul yihiin cudurada fangas. Intaa waxaa dheer, daryeelka duurka iyo geedisocodka goynta ayaa si fudud loo fududeeyay.
Talooyinka beerta - Basbaas, korriin iyo daryeel.
Baro noocyo kala duwan oo khafiif ah //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte/dynya-na-sobstvennom-ogorode-vyrashhivanie-i-uhod.html.